अष्ट्रिच पालनमा फाईदै फाईदा, हेर्नुहोस् नेपालकै ठूलो अष्ट्रिच फार्म, जहाँ दिनमै २ हजार किलो मासु बेच्छन् (भिडियो) – Etajakhabar
अष्ट्रिच पालनमा फाईदै फाईदा, हेर्नुहोस् नेपालकै ठूलो अष्ट्रिच फार्म, जहाँ दिनमै २ हजार किलो मासु बेच्छन् (भिडियो)
ठुलो चराको रुपमा चिनिने अस्ट्रिच पालेर रुपन्देहीका सीपि शर्मा व्यवसायिक बन्दै गएका छन् । उनले वि.स. २०६५ सालबाट रुपन्देहीको तिलत्तोममा नगरपालिकामा अस्ट्रिच पाल्न सुरु गरेका हुन् । नेपालमा अस्ट्रिच चरो भित्र्याउने पहिलो शर्मानै हुन । ‘नेपालमा अस्ट्रिच ल्याउने हामी नै हो’ उनले भने, ‘पहिला त नेपालको चिडियाखानामा पनि अस्ट्रिच पाइन्थेन ।’ अस्ट्रिच पालेर आफुलाई सन्तुष्टि मिलेको उनले जानकारी दिए । अहिले उनको अस्ट्रिच नेपाल प्रालीमा ४ हजार बढी अस्ट्रिच छन् ।
वि.स. २०६५ «सालबाट सुरु भएको अस्ट्रिच पाल्ने अभियानले अहिले व्यापकता पाएको उनले बताए । उनका अनुसार अन्य किसानहरु पनि अस्ट्रिच पाल्न थालेका छन् । अस्ट्रिच पाल्न चाहने किसानहरुले आफुहरुलाई सम्पर्क गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
टर्की किसानका अनुसार यो लोकल कुखुराजस्तै हो । एक महिनासम्म यसलाई चिसोबाट जोगाउनुपर्छ । न्यानोमा राख्नुपर्छ । यो बेला चल्ला लगेमा बचाउन समस्या हुन्छ । ठूलो भएपछि समस्या हुँदैन । यसले ८० प्रतिशत घाँस र २० प्रतिशत दाना खान्छ । दुबो र बर्सिम घाँस खुवाउने गरिएको छ । यसलाई खुला रूपमा चराउन पनि सकिन्छ । अस्ट्रिचलाई भने कम्पाउन्डिङ (तार घेरा) गरेर राखिन्छ । यसलाई बाहिर लगेर डुलाउनु पर्दैन ।
एउटा परिपक्व अस्ट्रिच १ सय २० किलोसम्म तौल र ८ फिटसम्म अग्लो हुने भएकाले ठूलो क्षेत्र चाहिन्छ । अस्ट्रिचको भाले ३ र पोथी २ वर्षमा वयष्क हुन्छ । वयष्कमा २ सय ५० किलोसम्म तौल हुन्छ । उचाइ ८ फिटसम्म हुन्छ । अस्ट्रिचको आयु ८० वर्षसम्म हुन्छ । ९ देखि १४ महिनामै यो एक क्विन्टल तौलको हुन्छ । ५० वर्षसम्म राम्रो उत्पादन दिन सक्ने एउटा पोथी अस्ट्रिचले एक सिजनमा १ सय २५ वटासम्म अण्डा दिन सक्छ । ४५ वर्षमा एउटा पोथीले ५ हजार २ सयसम्म अण्डा दिन्छ । प्वाँख फेसनदार कपडा बनाउन र सफाइको सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ । छाला जुत्ता, पेटी सफासेट, गाडीलगायतको कभर बनाउन र अण्डा तथा बोसो उच्चस्तरका क्रिम, लोसन र औषधि बनाउन प्रयोग हुन्छ । अस्ट्रिचको अण्डाको खोल पनि सजावटका सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
टर्कीपालनमा चल्ला पाउन समस्या छैन । २८ दिनमा अण्डाबाट चल्ला निस्कन्छ । मिनी ह्याचरीबाट चल्ला निकाल्न सकिन्छ । अहिले चितवन, बाराका टर्की फार्ममा चल्ला पाइन्छ । अन्य ठाउँमा पनि फाट्टफुट्ट चल्ला पाइन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरिने मेला महोत्सवमा समेत यसको चल्ला राखिएको हुन्छ । अस्ट्रिचको चल्ला अस्ट्रिच नेपाल प्रालिले समेत बेच्न थालेको छ । व्यवसाय गर्न चाहनेले विदेशबाट आयात गर्नु पर्दैन । रूपन्देहीबाटै किन्न सकिन्छ ।
कुखुरालाई जस्तै टर्कीलाई पनि दाना खुवाउन सकिन्छ । सुरुमा एल वान र एल टु दाना खुवाउनुपर्छ । अण्डा पार्न थालेपछि एल थ्री दाना खुवाउनुपर्छ । यो दाना लेयर्स कुखुरालाई खुवाउने दाना हो । यसले घाँस खान्छ । त्यही भएर घाँस पाल्ने ठाउँ आवश्यक पर्छ । बढी फाइबर चाहिने भएकाले नरम घाँस खुवाउन जरुरी हुन्छ । तर, अस्ट्रिचको आहारा टर्कीको भन्दा फरक छ । यसको प्रमुख आहारा कोसेबाली हो । लेघुम जातको घाँस यसले धेरै रुचाउँछ । यसलाई २० प्रतिशत अन्न र पानी खुवाउनुपर्छ ।
टर्की–अस्ट्रिच पाल्ने सोच तपाईंमा पलायो भने यसको फार्म एकचोटि हेर्नुस् । विज्ञसँग राम्रोसँग परामर्श लिनुस् । अब टर्की र अस्ट्रिच पाल्न तयार हुनुस् । जग्गाको कागजपत्र जुटाउनुस् । त्यसपछि गाविस वा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुस् । प्रालि बनाउने भए कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउनुस् । होइन भने घरेलु र पशुसेवा कार्यालयमा दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न अघि बढ्नुस् । दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटो र व्यवसायको संक्षिप्त विवरण पनि साथमा बुझाउनुस् । दर्ता गर्दा न्यूनतम शुल्क लाग्छ ।
Posted on: Tuesday, November 5, 2019 Time: 13:48:55
-20183 second ago